Sinaar qalabka xardhan ee cirifka ah
hoos u dhigaya qalabka jiilaalka ah ee heeraarka ah ee 130mm flange, shebekad shebekad xawaare ku dheehan oo sheybaar, shebekad sheybaar kuleyl ah, dhimis qalabka korantada ee korantada, hoos u dhigida qalabka xardhan ee shebekad, galka gearbox, gudaha shebekada
Taxanaha R taxanaha qalabka gaaska wuxuu leeyahay astaamaha cabirka yar, culeyska fudud, awoodda dhalida sare, waxtarka sare, nolosha adeega muddada dheer, rakibida haboon, kala duwanaanta awooda korantada iyo kala soocida wanaagsan ee saamiga gudbinta .Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa qalabka loo baahan yahay hoos u dhac ku yimid warshadaha kala duwan. Dhammaan arjiga sare ee 'Torque Torque' waxay qeexayaan matoorrada maaddada 'Inline Helical gear matoorrada' iyo 'linjektiyeyaasha' khadka tooska loo yareeyo waxaa la siiyaa hal, laba laab iyo dhimis safar.
Xadka awoodda: 0.12- 200KW
Kala duwanaanta raashinka gudbinta: 1.3-33000
Wax soo saarkii (Kn.m): kor ilaa 50
Kala duwanaanta alaabta: Varitron Helical Gear Motor Reducers Drive waxay leedahay qaabab kala duwan oo buuxa. Waxtarka sare, Qalabka Helical, Inline, matoorrada, ac, Mount Mount.
(1) Qalabka korantada sare ee korantada oo u dhigma SEW
(2) Dib-u-habeyn qalabka korantada oo ay kujirto labada weji iyo wejiga kaliya
Awooda: hoos ilaa 0.3w, 0.12kw 0.18kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw kor 250kw
Awoodda fardaha: 0.2hp 0.25hp 0.35hp 0.5hp 0.75hp 1hp 1.5hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp 7.5hp 10hp 12hp 15hp 20hp 25hp 30hp kor u dhaaf 350hp
Voltage: 3v 6v 12v 24v 48v 90v 110v 115v 120v 200v 220v 230v 380v 400v 415v 660v iwm.
1. Qalabka is-miidaaminta ee taxanaha ah ee naqshadeysan, dhisme isku xiran, cabbir ka yar kan X ama B taxanaha qalabka cycloidal gearmotor isku mid ah oo la oggol yahay.
2. gariir yar iyo dhawaq yar, oo leh hufnaan baahin badan.
3. Alaabtu waxaa badanaa loo isticmaalay mashiin kiimiko, mashiinka sibidhka, daabacaadda iyo mashiinnada baakadaha, miinada iyo mashiinnada gudbinta, biraha iwm.
HT250 bir xoog badan oo bir ah
Waxyaabaha qalabka leh
20CrMnTi steel daawaha
Meelaha dusha sare ee gearska
Waxyaabaha guntinta galka / soo-saarka
42CrMo aluminium bir ah
Guntinta adkaanta / soosaarka soo-saarka
Saxeexa saxda ah ee gearsooyinka
shiidi sax ah, 6 ~ 5 Darajo
duufsasho, sibidhis, deyn, iwm.
94% ~ 96% (waxay kuxirantahay marxaladda gudbinta)
Kuleyl kaca (MAX)
Heerkulka Kicitaan (Saliid) (MAX)
NSK, SKF ama Shirkadaha Shiinaha Sare
Nooca sumadda saliida
CFW, NAK ama noocyo kale
R taxane waxbarista qalabka heical, oo ay weheliso shuruudaha farsamada ee caalamiga ah, waxay leedahay maadooyin tikniyoolajiyad sare leh, waxay keydisaa meel, waa mid la isku halleyn karo oo waarta, waxay hor istaageysaa culeyska xad dhaafka ah ee b, tamarta ilaa 132Kw, isticmaalka tamarta hooseysa, waxqabadka sareeya, hufnaanta wax soo saarka ilaa 95% Sare, gariir hooseeya, buuq hooseeya, keydinta tamarta sare, agab tayo sare leh oo bir ah, bir bir qafiif ah oo jirka ah, dusha sare ee qalabka kadib carburiing iyo ruxida, mishiinka saxda ah, hubinta isku-dheellitirka shandanka iyo meeleeynta shuruudaha, sameynta qalabka wareega wareejinta mashiinka khiyaanada, noocyada matoorrada ee ka kooban isdhaxgalka elektromechanical, waxay si buuxda u dammaanad qaadayaan tayada sheyga.
Taxanahan taxanaha ah, hoos udhaca shay-darka hal-abuurka giirteyaasha ayaa laga heli karaa hal, labo, iyo seddex-dhimis. Noocyo Fara badan oo Gelinta Waxqabadka ah ee loo yaqaan 'ModEL Input Flanges Couple Input Shaft Couple' oo leh LHF LVF MVF MVF RXHF LHD LVD MHD. Waxaan ku bixinaa dhimisyo mareegaha toosan oo sarreeya qiimaha ugu fiican. Bixiyeheena qalabka hepatical - ka ayaa bixiya gudbinta awooda la isku halleyn karo ee sida caadiga ah loo isticmaalo sida daaweynta biyaha, mashiinka wax lagu karsado, miinada, warshad sibidhka, warshadaynta miinada.
Qeexida matoorka cufan ee cilmiga leh:
Baraha-gacmeed-gacmeed-gacmeedka ayaa ah guntinta dhimista sheeko xariiqda. La qabsiga kobcinta, fikradda naqshadeynta sare ee nidaamka isku dhafka moduleka ayaa leh astaamaha cabbirka yar, culeyska fudud, wareejinta weyn, billowga deggan, kala-soocidda saamiga gudbinta, iwm, waxaana lagu xiri karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha adeegsadaha iyo rakibidda kala duwan. jagooyinka. Waxay ka kooban tahay bir tayo sare leh oo tayo sare leh oo leh carburi-dusha sare iyo daaweyn adag. Waxay leedahay awood xoog leh iyo cimri dheeri.
Baraha galka Helical waxaa loo soo saaray si waafaqsan shuruudaha farsamada ee caalamiga ah waxayna leedahay maadooyin farsamo sare.
2, keydi meel bannaan, la isku halleyn karo oo waarta, oo leh culeys xad dhaaf ah, awood illaa 132KW;
3, isticmaalka tamarta hooseeya, waxqabadka sare, hufnaanta dib-u-habeyuhu wuxuu la mid yahay 95% ama ka badan
Gariir hooseeya, dhawaqa hoose iyo keydinta tamarta sare;
5, xulashada qalabka birta oo tayo sare leh, sanduuqa birta lagu tuuro, dusha sare ee qalabka ka dib daaweynta kuleylka badan;
Qalabka toosan ka dib si loo hubiyo isbarbar dhiga shafka iyo shuruudaha meeleynta, sahamiyaha sameeya qaabdhismeedka qalabka gudbinta cirbadaha wuxuu ku qalabeysan yahay noocyo kala duwan oo matoorro ah, kuwaas oo lagu daro mechatronics, oo si buuxda u dammaanad qaadaya astaamaha tayada ee alaabada .
Qalabka taxanaha R reducer xogta farsamada
model Usheeda Dia Dhererka Xarunta Wax soo saarka Flange Dia. Power saamiga Torque ogolaansho Miisaanka
Adag (mm) (Mm) (Mm) (Kw) (Nm) (KGS)
Dib-u-calaamadeyn: culeyska aan lahayn saliida iyo mooto, xarkaha iyo gelinta flange waxay ku darayaan 10%.
Sanduuqa Helical Gear ka dhex abuuri kara moodeello kale iyo kala beddelasho, hel isugeynta saamiga weyn iyo kala duwanaanta. Sidaa darteed waxaa lagu dabaqaa aagag badan oo warshadeed, sida miinooyinka biraha, kor u qaadista gaadiidka, dhismaha batroolka, dharka, deegaanka, koronto khafiif ah, mashiin caag ah, qalabka baarkinka iyo wixii la mid ah.
Sogears R taxane adag oo hagista heical heical (garka si buuxda u shiidan)
Taxanaha ah cilmiga barashada cilmiga leh waxaa loo naqshadeeyay oo la soo saaray iyada oo ku saleysan nidaamka isku-dhafka modular. Waxaa jira isugeyn badan oo mootooyin ah, qaabab rakibayaal iyo qorshayaal dhismeed. Saamiga gudbinta ayaa si wanaagsan loo qiimeeyay si uu ula kulmo xaalado shaqo oo kala duwan, xaqiijiyo is dhexgalka elektaroonigga, hufnaanta gudbinta sare iyo isticmaalka tamarta yar. Bandhig heer sare ah. Qalabka dusha sare ee ilkaha adag wuxuu ka samaysan yahay bir macdaysan oo tayo sare leh, dusha sarena waxaa ku adkeeyay karbaashka iyo ruugitaanka, ilkaha ilkiidka ayaa si fiican loo baaraa, gudbinta waa mid deggan, buuqa ayaa hooseeya, awoodda wax soo saaridda ayaa weyn. Heerkul hooseeya iyo cimri dheer. Waxaa si balaaran looga isticmaalaa warshado badan, sida macdanta, daaweynta bullaacadda, kiimikada, dawooyinka iyo warshadaha kale.
Ku habboon awood sare
Naqshadaynta cimriga dheer
Moodhadhka ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee R37-R167
Isugeynta taxanaha RM ayaa si gaar ah loogu talagalay isku-darka qalabka
Shan: Qiyaasta wax soo saarka:
Tartan soo saare: Ilaa 18000N.m
Xawaaraha wax soo saarka: 0.16-1028 RPM
Foomka rakibida: rakibida xagal hoose / rakibida flange
Waxqabadka gudbinta: 2 (saamiga: 5-24.8): 96%, 3 (saamiga: 27.2-264): 94%
R: Cagta caynka-cagaarka ah RF: Fidida Flange
R ... F: Kor u qaadka lugta RM: Flange fidinta guryo dulqaad dheer leh
RX: Fidinta marxaladaha cagta ee RXF: Fududaynta hal meel oo keli ah
Moodooyinka ugu waaweyn ee taxanaha xariijinta xariijinta heedaha adag ayaa ah:
Moodooyinka ugu waaweyn ee taxanaha R taxanayaasha cirifka cirfiidka ee qalabka ciribtirka hal-masraxa waa:
Soo dhowow waad ila soo xiriirtaa haddii aad xiiseyneyso badeecadeena.
Kooxdayadu waxay taageeri doontaa baahi kasta oo aad qabtid.
1 S: Muuqaal noocee ah ayaan kuu sheegayaa si aad u xaqiijiso qalabka wax baraha?
J: Qaab / Cabir B: Awoodda matoorka C: Xawaaraha soo-saarka D: Cunsurka adeegga.
2 S: Kawaran hadaanan garanaynin qalabka wax kabada ee aan u baahanahay?
A: Ha walwelin, U dir macluumaad badan intii aad karto, kooxdayada ayaa kaa caawin doonta inaad hesho midka saxda ah ee aad raadineyso.
3 S: Mudo intee leeg ayaan sugayaa jawaab celinta kadib markaan diro waydiinta?
A: 12 saacadood gudahood.
4 S: Waa maxay xilligaaga shaqo u tababbarashada qalabka?
A: Waxaan bixinaa hal sano oo dagaal ah tan iyo markii markabkii uu ka dhoofayay Shiinaha uu ka tagay Shiinaha.
5 S: Waa kuwee warshadaha loo adeegsado dib u habeynta qalabkaaga qalabkaaga?
A: Sanduuqyadayada ayaa si balaadhan looga isticmaalaa meelaha sibidhka, dharka, ka shaqeynta cuntada, cabitaanka, warshadaha kiimikada, qalabka kor u qaadida, qalabka keydinta otomaatiga, macdanta, tabacco, ilaalinta deegaanka, saadka iyo iwm.
6. S: Sida loo geeyo
J: Badweynta - Magacaabiista iibiyaha iibiyaha, ama kooxdayada iibku waxay u arkaan soo gudbiyaha ku habboon iibsadayaasha.
Hawada - Bixinta iibsadaha aruurinta koontada tooska ah, ama kooxdayada iibku waxay u helaan xawaare ku habboon iibsadayaasha. (Badanaa muunad)
Kuwa kale - Waxaan kuu diyaarinaynaa inaan alaab u geyno meel ka mid ah Shiinaha oo ay soo magacaabeen iibsadayaashu.
7. Markaad amar bixiso, kooxdayada ayaa kula xaqiijin doonta adiga ku saabsan midabka, xirmada, habka lacag bixinta iyo gaarsiinta, ka dib qandaraaska iibka ayaa laguu soo diri doonaa si loo xaqiijiyo.
Qalabka Helical, Helical Gear Motors